Etu ị ga - esi wuo Email Ndepụta Gị Maka Ecommerce gị | ECommerce ozi ọma
Etu esi ewu listi email gi maka Ecommerce gi
Ahịa email dị mkpa maka Ecommerce gị ka gị na ndị ahịa gị nwee nkwukọrịta ma ị nwere ike ịkekọrịta akụkọ, nkwalite, akwụkwọ akụkọ na ihe ndị ọzọ. Iji mezuo nke a ọ dị mkpa - mepụta ndepụta email nke ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ndị ahịa na ndị debanyere aha, iji nwee ohere ka mma ịzụrụ.
1 Kedu ihe kpatara ịmepụta listi email maka Ecommerce?
2 Kedu esi ewepụta listi email maka Ecommerce?
Kedu ihe kpatara ịmepụta listi email maka Ecommerce?
Ihe doro anya kpatara iji wuo a ndepụta email bụ iji bulie ọnụ ahịa ndị ahịa gị na ego nke ụlọ ọrụ gị. Agbanyeghị, ịkwesịrị iburu n'uche na listi email ndị ahịa gị bụ a akụ nke ụlọ ọrụ gị, Yabụ na ọ bụrụ n'ịchọrọ ire ụlọ ọrụ gị, listi nzipu ozi a nwere ike ime ka ọnụego gị zuru ezu. O nwedịrị ike inye gị ohere ire ahịa mgbasa ozi na ngwaahịa email gị ma ọ bụ zipu ozi nke ndị mmekọ ma ọ bụ ndị mgbasa ozi na-akwado.
Kedu esi ewepụta listi email maka Ecommerce?
N'ezie ebe ezi uche dị na ịchọta ndị debanyere aha email bụ ebe nrụọrụ weebụ Ecommerce gị. Ọ bụrụ na ndị ọrụ na-aga na saịtị gị, ha nwere mmasị na ozi ma ọ bụ ọdịnaya ị na-enye ha. Ya mere, ọ na-atụ aro na onye ọ bụla na peeji nke gị na saịtị na-agụnye a ubi ka aha na email.
Ugbu a, onye ọ bụla na-eleta saịtị gị dị mkpa, n'agbanyeghị ma ha zụrụ ma ọ bụ na ọ zụtaghị, mana n'ezie ndị ahịa na-azụ ihe bara uru karịa ya. ozi ahia. Ya mere, ọ dị mma ka ị kwado ma mee ka ụzọ ha ga-esi denye aha mara mma ebe ọ bụ na nke a, ị gaghị eme naanị ndepụta nzipu ozi dị ukwuu, kamakwa ndepụta nke ndị ahịa kachasị baa uru na akụkọ ihe mere eme gosipụtara.
Tinyere ihe ndị a dị n'elu echefula netwọk mmekọrịta, yana engines ọchụchọ site na ọchụchọ na-ahazi ma na-akwụ ụgwọ ọchụchọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Etu esi ewu listi email gi maka Ecommerce gi
Kaadị 66; ụgbọ ibu azụmahịa maka Ecommerce WordPress
Kedu ihe bụ 3DCart na gịnị kpatara ị ga-eji ya na Ecommerce gị?